Public Health in Myanmar: Hepatitis B medical treatment (ဘီ) ပိုးဆေးပေးခြင်း
Fri, May 11, 2012 at 11:32 AM
(1) Could it be possible the Hepatitis B result negative after one year the person was infected? During one year the patient was taking medicine course which instructed by doctor.
(2) Could it be consider that negative result the patient is fully recover as 100 percent and other people will not be infected from him?
• အသဲရောင် (ဘီ) ပိုးရှိနေသူကို ဆေးကုသတာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတွေ တက်ကြွမနေအောင်၊ အသဲထဲမှာ ပွါးများ မလာစေအောင် လုပ်တာ ဖြစ်တယ်။ ဆေးကနေ အဲလိုလုပ်ပေးတဲ့နောက်မှာ ကိုယ့်ခုခံအားကနေ ပိုးတွေကို နှိမ်နိုင်လာမယ်။ အသဲကိုလဲ ဆက်ပြီး ပျက်စီးတာ မဖြစ်အောက် ကာကွယ်ပေးနိုင်မယ်။ အသဲခြောက်တာ၊ အသဲကင်ဆာ ဖြစ်မလာစေဘူး။
• အသဲရောင် (ဘီ) ပိုးကူးစက်ခံရသူတွေထဲက ၉၅% မှာ သူ့အလိုလို ရောဂါပိုးတွေ ရှင်းသွားနိုင်တယ်။ ဆေး မလိုဘဲ ရှင်းသွားတာကို ဆိုလိုတယ်။ တချို့မှာတော့ နာတာရှည် အသဲရောင် ဖြစ်နိုင်တယ်။ ၆ လနေလို့မှ ပိုးကင်းရှင်း မသွားရင် အဲလိုဖြစ်လာနိုင်တယ်။ အသဲရောဂါဖြစ်လာမယ် အသဲထဲမှာ ပိုးတွေက ပွါးများလာမယ်။ ဆေးကုသဘို့ လိုနိုင်တယ်။
• နာတာရှည် အသဲရောင်အတွက် လောလောဆယ် ဆေး ၃ မျိုးသုံးနေတယ်။ (၁) Pegylated Interferon (Peginterferon) (၂) Lamivudine နဲ့ (၃) Adefovir (ADV) တွေဖြစ်တယ်။ တတိယဆေးက ဒုတိယဆေး မတိုးသူတွေကို ပေးတယ်။ Lamivudine ကို အများဆုံး သုံးနေတယ်။
• ဆေးမပေးခင် HIV နဲ့ Hepatitis C ရှိ-မရှိ စစ်မယ်။ Hepatitis A vaccine ကာကွယ်ဆေးလဲ ထိုးပေးမယ်။
1. Peginterferon ဆေးဆိုတာ ဗိုင်းရပ်စ်ကို ခံတိုက်ဘို့ရာ လူ့ကိုယ်ထဲကနေ အလိုလိုထုတ်ပေးတာမျိုး ဖြစ်တယ်။ ဒီဆေးကြောင့် ဗိုင်းရပ်စ်တွေ ပွါးများလာမှာကို တားဆီးမယ်။ ဒီဆေးကို အရေပြားအောက်မှာ တပါတ်တခါ၊ ၆-၁၂ လကြာထိုးပေးရတယ်။
• နာတာရှည် အသဲရောင်လို့ ဒီဆေးထိုးသူတွေထဲက ၃၅% မှာ ရေရှည်အကျိုးရတာ တွေ့ရတယ်။ ဆေးစစ်ရင် ဗိုင်းရပ်စ်တွေ များလာတာက ရပ်သွားတာတွေ့ရမယ်။ အသဲအလုပ်လဲ ပုံမှန်ဖြစ်နေမယ်။
• ဆေးရပ်ပြီးနောက် ပိုကောင်းလာမျိုးလဲ ရှိတယ်။
• တချို့မှာ ဆေးကုသမှုခံယူနေရင်း အခိုက်အတန့်လောက် အသဲရောင်တာ ပိုဆိုးလာတတ်တယ်။ ဒီလို ဖြစ်တာကို Hepatitis B flare လို့ခေါ်တယ်။ တခါတလေ ပိုးတွေရှင်းသွားပြီး၊ အသဲလဲ အလုပ် ပုံမှန် လုပ်နိုင်လာကြတယ်။
• ဆေးရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ အများအားဖြင့် တုပ်ကွေးမိသလို ဖြစ်တာပါဘဲ။ ကိုယ်ပူ၊ ချွေးထွက်၊ အဆစ်တွေနာ၊ ခေါင်းကိုက်။ Paracetamol ပါရာစီတမောကို ၄ နာရီတခါသောက်ရင် သက်သာမယ်။ ဖြစ်ကာစသာဆိုးတယ်။ တချို့မှာ စိတ်ဓါတ်ကျမယ်၊ စိတ်မူပြောင်းတယ်။ ဆံပင်ကျွတ်တာ၊ ကိုယ်အလေးချိန် ကျတာတွေလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဆိုးကျိုးက ဆိုးတာဖြစ်နေရင် ဆေးလျှော့ပေးတာ၊ ဆေး ခဏနားထားတာလဲ လုပ်နိုင်တယ်။
2. Lamivudine ဆေးဆိုတာ၊ သောက်ဆေးဖြစ်တယ်။ ဗိုင်းရပ်စ်ကို ပျက်စီးစေမယ်။ ပွါးများတာကို တားပေးမယ်။
• တနေ့ ၁ လုံး၊ ၁ နှစ် အနည်းဆုံး သောက်စေတယ်။
• နာတာရှည် အသဲရောင်လို့ ဒီဆေးသောက်ရသူထဲက ၂ဝ-၃ဝ% မှာ ရေရှည် အကျိုးများစေတာ တွေ့ရတယ်။
• ဆေးရဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ မဆိုးပါ။ ခေါင်းကိုက်၊ ဗိုက်နာ၊ ဝမ်းပျက်၊ မောပန်း၊ အားယုတ်။ ဆေးကို စောပြီး မသောက်ဘဲရပ်လိုက်တာ မကောင်းဘူး။ တချို့မှာ ဆေးယဉ်လာတတ်တယ်။
3. Adefovir ဆေးဆိုကို Lamivudine ဆေးယဉ်သူတွေအတွက် သုံးတယ်။ တနေ့ ၁ လုံးသောက်ရတဲ့ဆေး ဖြစ်တယ်။